ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »7သင်တစ်ဦး Foodie ချိန်းတွေ့ခြင်းမပြုမီသိထားသင့်သောအရာတို့ကို
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အစာကိုတစ်ဦးကြီးမားသောပန်ကာမဖွစျပါ၏နေစဉ်, ငါ၏အမိတ်ဆွေများနှင့်ရက်စွဲများအများစု Self-ဟစျကျွောကွအစားကောင်းကြိုက်သူများပြီ. ဒီသက်တမ်းပဲအစားအစာ၏ဓာတ်ပုံများကိုယူပြီးနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာကပို့စ်တင်မဆိုလိုပေ. အစားကောင်းကြိုက်သူများအစားအစာစွဲနေကြတယ်, ထိုသို့ငါသူတို့စားစရာဘို့သွားပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုဝေးသင်ယူခဲ့ကြသည့်နေရာတွင်အစားကောင်းကြိုက်သူများနဲ့ငါ့ဆက်ဆံရေးကိုတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်.
အစားအစာကိုမှသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းသောသင်တို့၌ပုံရိပ်လုပ်နိုင်ဘာမှကျော်လွန်တတ်. စားနပ်ရိက္ခာသောနေ့ရက်ကာလကို၏ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်. နှင့်, အကိုရှာဖွေရေးဆွဲမရှိလိုင်းရှိပါတယ် “စုံလင်သော” အစာကို item. ကိုယ့်လက်ျာစတော်ဘယ်ရီအဘို့ကြီးသောအကွာအဝေးခရီးသွားလာပြင်ဆင်ထား Be.
ဒါကြောင့်အစာကိုတွဲချိတ်ရန်ကြွလာသောအခါအစားကောင်းကြိုက်သူများကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်. သူတို့ဆန်နှင့်အတူငါးကိုစားသို့မဟုတ်နှစ်ဦးအတူတကွဝက်အူချောင်းရောစပ်အကြံပြုလိုလျှင်, ထိုသို့နှင့်အတူလိုက်. သူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တစ်ဦးထက်ပိုအရသာပန်းကန်ရန်သင်၏မျက်စိကိုဖွင့်လိမ့်မည်အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာ.
အစားကောင်းကြိုက်သူများလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းသူတို့၏အစာကိုမြည်းစမ်းခြင်းဖြင့်အနံ့အရသာကြွားရန်ပြင်ဆင်လေ့. ဒီရီစရာမြည်စေခြင်းငှါနေစဉ်, ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်သငျသညျအလှည့်၌သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုအကြိုးပွုနိုငျသောပိုပြီးအစာတန်ဖိုးထားမှကူညီပေးပါမည်.
ဒါကြောင့်ကို Yelp သို့မဟုတ် Google ရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်, ချက်ချင်းအသစ်တခုစားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ပန်းကန်ကြိုးစားနေပြီးနောက်, သင့်ရဲ့အစားကောင်းကြိုက်သူများတစ်ဦးအစားကောင်းကြိုက်သူများအဖြစ်တစ်ဦးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသားခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်လာလိမ့်မည်, သူတို့အသစ်တွေ့ရှိရရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏အခြားအစားကောင်းကြိုက်သူများအကြောင်းကြားရန်တာဝန်ခံစားရ.
ရက်စွဲများနှင့်နယ်လှည့်အစာတစ်ဝှမ်း revolve လိမ့်မည်. အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူတို့မဖြစ်မနေ-ကွိုးစားဟင်းလျာများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များပုံးတစ်ပုံးစာရင်းရာ၌ခန့်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း. သူတို့ကိုလုပ်ကြ, စာရင်းထဲမှာကြည့်ရှုနှငျ့သငျကွိုးစားချင်သောသူတို့သည်လည်းထိုစားသောက်ဆိုင်၏အနည်းငယ်ထွက်ကောက်.
အစားကောင်းကြိုက်သူများသူတို့အကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်မှာဆာဗာနှင့်အတူအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာ. သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအစာကျော် Bond ရကြဘူးဒါပေမဲ့ဆာဗာကိုသိရန်ရတဲ့ဈေးလျှော့နှင့် / သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ဟင်းလျာများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်မသာ. လည်း, ကဆာဗာကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါအကြိုက်ဆုံး server ကိုရှိခြင်းသာစားသောက်ဆိုင်မှာသွားဆိုလိုသည်.
သင့်ရဲ့အစားကောင်းကြိုက်သူများထွက်စားသောက်လိုပါဘူးဒါပေမယ့်သူတို့အများစုဖွယ်ရှိမီးဖိုချောင်အတွက်အလွန်အသုံးဖွစျလိမျ့မညျမသာ. သငျသညျအရသာချက်ပြုတ်နည်းများကွိုးစားရချိန်တွင်, အစားကောင်းကြိုက်သူများဖြစ်လိမ့်မည် “ပျောက်ဆုံး” နာရီမီးဖိုချောင်ထဲမှာ. သူတို့ချက်ပြုတ်စိတ်ဓါတ်များရကြဘူးဘယ်အချိန်မှာ, သူတို့ကိုငါနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့မီးဖိုချောင်မှာသူတို့ကိုပူးပေါင်းအကြံပြု.
သငျသညျအရာတစ်ခုခုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အခါသင်သိဘယ်တော့မှ. အနီးဆုံးကုန်စုံစတိုးဆိုင်သည်အဘယ်မှာရှိအစားကောင်းကြိုက်သူများမသိသာသော်လည်း, သူတို့သည်လည်းနာရီကိုသိရလိမ့်မည်. နောက်ဆုံးမိနစ်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်ပြေးစေရန်ပြင်ဆင်ထား Be.
တစ်ဦးအစားကောင်းကြိုက်သူများချိန်းတွေ့အမြဲတစ်ဦးစွန့်စားမှုဖြစ်ပါသည်. သူတို့ရဲ့အရူးကဲ့သို့စွဲလက်ခံခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျကျိန်းသေနောက်တဖန်မေတ္တာသည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်.